အသည်းရောင်အသားဝါ-စီကို တန်ပြန်တိုက်ခိုက် အနိုင်ရရှိခဲ့သူ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
မတ် 7, 2018 Surasak Aekpongpaisit, M.D.
Surasak Aekpongpaisit, M.D. ကိုခင်မောင်ဝင်း နှင့် ဇနီး မစိုးစိုးဝင်း
ပုံမှန် နှစ်စဉ် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူသော အခါမှ အသည်းရောင်အသားဝါ-စီပိုးရှိနေကြောင်းသိရှိ
ကိုခင်မောင်ဝင်း ဟာ အသည်းရောင်အသားဝါ-စီပိုးရယ်လို့သွားရောက်စစ်ဆေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်စဉ်ပုံမှန် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုသောအခါမှ မိမိမှာ အသည်းရောင်အသားဝါ-စီပိုးရှိနေကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ-စီပိုးရှိတယ်လိုသတိထားမိစေတဲ့ လက္ခဏာ ထွေထွေထူးထူးမရှိ
အသည်းရောင်အသားဝါ-စီပိုးလက္ခဏာများရယ်လိုထွေထွေထူးထူးခံစားရတာဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၈လပိုင်းမှာ နှစ်စဉ် ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုပြုတဲ့အခါမှ မိမိတွင် အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုးရှိမှန်းသိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကိုခင်မောင်ဝင်းဟာ အစောပိုင်းမှာတော့ အသည်းရောင်အသားဝါ-စီပိုးကို မြန်မာပြည်မှာ ပဲ သောက်ဆေးဖြင့်ကုသဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ကိုခင်မောင်ဝင်း၏ ဇနီး မစိုးစိုးဝင်းက တော့ အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ခင်ပွန်းသည်အတွက် အကောင်းဆုံးဆေးကုသမှုပေးနိုင်မည့် ဆေးရုံ ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါ ဒေါက်တာသန့်ဇင်ဦးမှတစ်ဆင့် ဆစ်မီတဝေ့ ဆေးရုံကို သိလာကာ ဆရာ့၏အကူအညီဖြင့် ဘန်ကောက်ဆစ်မီတဝေ့ကို လာရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားခဲပါတယ်။ သို့သော် မစိုးစိုးဝင်းတစ်ယောက် ဘန်ကောက်မြို့ရှိဆစ်မီတဝေ့ ဆေးရုံကောင်းမကောင်းကိုယ်တိုင် လေကြည့်ချင်သေးတာကြောင့် ဆစ်မီတဝေ့ဆေးရုံကို သူကိုယ်တိုင်လာရောက်လေ့လာကြည့်ခဲပါတယ်။ လေ့လာကြည့်ပြီးသူမစိတ်တိုင်းကျပြီး ဒေါက်တာသန့်ဇင်ဦး၏ အကူအညီဖြင့်ဘန်ကောက်ဆစ်မီတဝေ့ ဆေးရုံမှာလာရောက်ကုသဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။
ဆစ်မီတဝေ့ ဆေးရုံကို ရွေးချယ်လိုက်ခြင်း
ဘန်ကောက်မှာ ဆေးရုံတော်တော်များများကို ရောက်ဖူးပါတယ်။ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခြင်းများကိုလည်းပြုပါတယ်။ ဒေါက်တာသန့်ဇင်ဦးက ဆစ်မီတဝေ့မှာ ပြကြည့်မလား ဆိုတော့ အမလည်း ဆေးရုံကို လာလေ့လာကြည့်တော့ အရမ်းအဆင်ပြေတာနဲ့ ရယ်နောက်ပြီး မြန်မာစကားပြန်တွေလည်းရှိတာရယ်ကြောင့် ရွေးချယ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ နဲ့ ဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံ
ဆရာဝန်ကြီးနာမည်က Dr. Surasak လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကြီးက သိပ်သဘောကောင်းပါတယ်။ လိုသေးမရှိဂရုစိုက်တယ်။ သူနာပြုများကလည်း သွေးဖောက်တဲ့အခါကော သေချာစနစ်တကျနဲ့ ဖောက်တယ်။ ဆေးသောက်ပြီး ၁လကြာတဲ့ အခါမှာ စီပိုးအကောင်ရေ က ဘာမှကိုမရှိတော့ဘူး။ ဆရာဝန်ကြောင့်မို့လာပြရတာကော စကားပြောရတာကော အဆင်ပြေတယ်။ မြန်မာစကားပြန်တွေလည်းရှိတာရယ်ကြောင့် အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။
ကိုခင်မောင်ဝင်း နှင့် ဇနီး မစိုးစိုးဝင်း မှ အသည်းရောင်အသားဝါ-စီပိုးရှိနေတဲ့သူများကို အကြံပြုချက်
ကိုယ့်မှ တကယ်လို့ စီပိုးရှိလာပြီးဆိုတာသိလို့ရှိရင် အသက်တစ်ချောင်းကို တန်ဖိုးထားပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ မစိုးရိမ်ဘဲနဲ့ ကုသကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် အခုခေတ်မှာဆေးတွေအရမ်းကိုကောင်းလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ စီးပိုးကောင်ရေ ၁ သန်းနဲ့ ၇ သောင်းပဲရှိတာပါ။အဲ့တုန်းကဆို အန္တရာယ်မရှိလောက်ဘူး ဆိုပြီး မကုသဘဲ ထားခဲ့တယ်။ အဲ့လိုစိတ်မျိုးထားပြီးတော့မကုသဘဲထားခဲ့လိုက်တာ နောက်တစ်နှစ် စီပိုး ပြန်လည်စစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာ ၄သန်းကျော်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ အဲ့ဒီအခါကျမှ ကုသမှု ခံယူခဲ့တယ်။ အမှန်တော့ ၃ လသောက်တာနဲ့ ပြတ်မည့်ဆေးကို တစ်နှစ်လောက်ကြာသွားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မည်သည်မဆို ဘာဆေးဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ် အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူသင့်ပါတယ်။ နောက်ပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ လည်းကြီးကြီးမားမားကြီးမရှိတာကြောင့်ကုသမှုကိုခံယူစေချင်ပါတယ်။
Surasak Aekpongpaisit, M.D. Summary: